I-BEIGE GRANITE COUNTERTOPS (IMIBALA KUNYE NEZITAYILE) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi I-Beige Granite Countertops (Imibala kunye neZitayile)
I-Beige Granite Countertops (Imibala kunye neZitayile)
Wamkelekile kwigalari yethu ebonisa imiphezulu yeetafile zenziwe ngexabiso lenyengane. Izixhobo zokubala zeBeege ziye zafunwa kakhulu emva kweminyaka yokwakha ikhaya elitsha kunye neeprojekthi zokulungisa. Apha ngezantsi uyakufumanisa ezona ndlela zilungileyo zokudibanisa imiphezulu yeetafile ze-beige kunye neekhabhathi zemibala eyahlukeneyo. Ukongeza uza kubona ezinye ze-granite ze-beige ezithandwa kakhulu ngoku. Le mifanekiso inokukunceda ufumane imibala ehambelana nesitayile sakho kunye nencasa yakho. Ngolwazi oluthe kratya malunga imiphezulu yeetafile lenyengane jonga isikhokelo sethu sokugqibela.
Imiphezulu yeetafile ithathwa njengenye yezona mali zibiza kakhulu onokuzenza ekhayeni lakho. Ngaphandle kokuba yenye yezona ndawo ziphambili ekhitshini lakho, i-countertop ikwayinto ehlala ihleli ekhayeni lakho ekufuneka ime kuvavanyo lwexesha. Kananjalo, ukukhetha i-countertop efanelekileyo ekhitshini lakho kufuna ukucwangciswa ngononophelo kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha. Ngokukhawuleza xa ugqiba uhlobo kunye nombala we-countertop oyifunayo ekhaya, ungayisebenzisa njengesikhokelo kulo lonke ikhitshi lakho kunye nokufezekisa uyilo oluhambelanayo kuya kuba lula kakhulu.
Ukuba ufuna i-countertop material enokuthi isebenze njengotyalo-mali olumkileyo nolusebenzayo kwikhaya lakho, cinga i-granite phezulu kwoluhlu lwakho. Granite ithandwa kakhulu ngenxa yomelele kunye nokuqina nto leyo eyenza ukuba izinto usule kakhulu ilitye yendalo izinto. Ukufumaneka kwayo kwimibala eyahlukeneyo kunye neepateni kubonelela ngamathuba oyilo olungapheliyo kunye ne-aesthetics ebonakalayo.
Phakathi kwebala elibanzi lemibala lenyengane, i-beige granite yenye yezona zinto zixabisekileyo kwaye ziguquguqukayo. Beige lenyengane iyafana imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe njengoko zombini zinomtsalane kwaye zilungele phantse nasiphi na isitayile yoyilo. Ukungathathi cala kwayo kunika ukhetho ngakumbi kunye nokuguquguquka njengoko inokudibana kakuhle kunye nekhabhathi ekhanyayo ekhanyayo nekhitshi. Kuba i-granite ye-beige nayo ayingeni ngombala omnye oqinileyo, imithambo kunye nokuhamba kwipateni yayo eyahlukileyo ikunika imibala yemibala onokuyisebenzisa ukulungelelanisa iphalethi yekhitshi lakho. Ukusuka kwi-beige e-creamy ukuya kwityheli yegolide etyheli kunye nomdaka wetshokholethi omnyama, i-granite ye-beige ilungile ekudaleni zombini ukuvumelana kunye nokuthelekisa kuyo nayiphi na ikhitshi ekhangeleka ngokubanzi.
Nangona i-beige granite izalisekisa iintlobo ezahlukeneyo zeendlela zoyilo, ifanelekile njengezinto zokubala zekhitshi zeklasikhi yakudala neyesintu. Idityaniswe nomsebenzi olungileyo wemigodi kunye nomgangatho, ngokuqinisekileyo iya kwenza nantoni na ekhitshini.
Nasi isikhokelo sethu esipheleleyo sokubeka imiphezulu yeetafile zegreyite zeembono zokuthelekisa kunye neyona ndlela zixhaphakileyo ezisetyenziswayo namhlanje.
Iikhabhathi eziMhlophe ezineBrown Granite
Iikhabhathi eziMnyama ngeGreen Beige Granite
Ukutshatisa Iipliti zeBeyi zeGreyite
Ukutshatisa imiphezulu yeetafile Gold Granite
Ukutshatisa kweTan okanye iBrown Granite Countertops
Iindidi zeBeege Granite
Umahluko yinto ephambili kuyilo lweekhitshi. Ukuba ukhetha ukusebenzisa umbala ocebileyo omnyama kwi-countertop yakho kunye nombala oqinileyo ngokulinganayo kwiikhabhinethi zakho, kukho ukuthambekela okuphezulu kwekhitshi lakho ukuba libukeke likhulu okanye limnyama kakhulu. Kwelinye icala, ukuba ukhetha imibala emibini ekhanyayo ekhanyayo kwiphalethi yakho yasekhitshini, ubume bendawo yakho buba buthuntu, buphele okanye bungaphili. Umahluko wenza ulungelelwano kunye nemvisiswano. Ukufezekisa umahluko, iikhabhathi ezinemibala ekhanyayo zinokudityaniswa kunye ne-countertop enemibala emnyama okanye ngokuchaseneyo.
Iikhabhathi ezimhlophe ngesitripthi esimdaka ngegranite yeyona ndlela ifanelekileyo yokwenza umahluko. Imfudumalo kunye nombala osisityebi wegranite emdaka yongeza ubunzulu kumbala othobekileyo weekhabhathi ezimhlophe ezenza ukuba isithuba simeme ngakumbi. Oku kubhangiswa kuqhele ukusetyenziswa kuseto lweKlasikhi okanye yesiNtu okanye yesiqhelo seKhitshi.
Lo mfanekiso ungasentla ubonakalisa isitayile sasekhitshini seKlasikhi esisebenzisa isitripthi esimdaka ngegranite esinombala osisiseko esimnyama kunye nemibala emnyama nengwevu. Cwangcisa iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kwisitayile esingaphakathi kunye nomgangatho okhanyayo we-cherry, umbala we-countertop uqhekeza ugcino lwendawo kwaye wongeza indawo ekugxilwe kuyo kwisiqithi sekhitshi. Ukongezwa kombala ogxininisayo kwiphalethi iyonke kufezekiswa ngokusetyenziswa kwezixhobo ezibomvu, ngelixa izixhobo zentsimbi ezingenasici zenza ukwahluka kwimvakalo. Ukudityaniswa kombala wekhabhathi ongathathi hlangothi kunye ne-countertop emnyama kwenza ukuba indawo ibenekhaya ngakumbi, imeme kwaye icolile.
Imeko yangoku yoyilo ekhitshini kukudityaniswa kweekhabhathi zekhitshi ezinombala omnyama. Imiphezulu yeetafile zeBeange ze-Beige zihamba kakuhle neCherry, iKofu, i-Espresso, iWalnut okanye iKhabhinethi yembala enemibala.
imvula ngosuku lomtshato
Lo mfanekiso ungasentla ubonakalisa ikhitshi yesitayile yanamhlanje enee-countertops ze-beige granite kunye neekhabhathi zekhitshi ezinemibala yekofu. Umxube wegreyithi emhlophe, emhlophe kunye nomdaka ngombala wegranite ibonelela ngeendlela ezininzi onokukhetha kuzo ngokulungelelanisa imibala yeekhabhathi. Kule meko, imithambo emdaka yecwecwe lokubala ilungiselela imibala yekhabhathi. Ukuthintela indawo ekujongeni emnyama kakhulu, kusetyenziswa iithayile ezikhanyayo zomgangatho kunye nophahla olumhlophe. Umahluko uyongezwa nokusetyenziswa kwendle enemibala ye-espresso.
Igranite enemibala yeCream yeyona nto uyithandayo ngokwesiko kwaye ixhaphake kakhulu kuyilo lwekhitshi yakudala efana neVictorian okanye iLizwe. Umbala wayo ongathathi hlangothi udibana kakuhle neendidi zemibala ekhitshini kunye nezikimu zoyilo. Ngomxube weepateni ezimdaka ngombala ezimdaka nezingwevu okanye iiflecks zamaminerali, ii-countertops ze-beige zibhangqwe kakuhle ngokukhanya okuphakathi, okuphakathi ukuya kumbala omnyama wekhabhathi yekhabhinethi.
I-Beige granite ikwabonelela ngokukhanya okuthe ngqo kwigumbi. Ngaphandle kobuqili, ikwanobunewunewu, intle kwaye inembonakalo yelizwe elidala ngakumbi xa idityanisiwe xa iikhabhathi zekhitshi ezimnyama ezinje ngekofu okanye itsheri. Enye inzuzo yokusebenzisa njenge-countertop kukuba ekubeni inombala okhanyayo, ihlala ibonisa ukutya okumibalabala ngokubonakala kwayo.
Ezinye zeentlobo eziqhelekileyo ze-beige granite ziColonial Cream Granite, iTyphoon Bordeauxmgranite, iGiallo Ornamental Granite kunye neGiallo Santo Granite.
Ukuba kwimeko yemeko yekhitshi eliphefumlelweyo le-Antique, sebenzisa nayiphi na into yokubala enemibala e-beige enee khabhathi ezimhlophe ezigungxayo kunye nezixhobo zentsimbi ezibrashiweyo okanye iikhabhathi zobhedu eziphatha ukujongana nembonakalo yendawo yonke. Lo ngumzekelo wesikhokelo sokuyilwa kwekhitshi ephefumlelweyo yeClassic: iikhabhathi ezikhanyayo okanye ezimhlophe ezinemibala, imibala yodonga ethulweyo kunye necomputer.
Eyaziwa ngokuba yigranite etyheli, imiphezulu yeetafile zegranite zeetoni zineetoni ezityebileyo ezongeza ubushushu kunye nokukhanya kuyo nayiphi na into esekhitshini. Ihlala inepateni yokuhombisa kakuhle kwimixube ebomvu, i-burgundy, emnyama okanye i-crystallizations ye-mica, feldspar okanye i-quartz. Ukudityaniswa kwemibala emibala ngokuchasene nemvelaphi yobusi egolide inika uphawu lwayo olwahlukileyo olwenza ukuba ibe luhlobo oluthengisa kakhulu lwegranite eMelika.
Imiphezulu yeetafile zegranite zegolide zihlala zisetyenziselwa ilizwe elinemixholo okanye iikhitshi zeRustic. Eyona nto ibhangqwe kakuhle phakathi kwikhabhathi enombala omnyama njenge-Honey, Maple okanye Antique White.
Ezinye zeentlobo zegranite zixhaphakileyo ziiMadurai / Madura Gold Granite, iKashmir Gold Granite, iSunset Gold Granite, Key West Gold Granite, iSta Cecilia Granite kunye neVenetia Gold Granite eNtsha.
Ukufezekisa umbono oqinisekileyo we-rustic ekhitshini lakho, zama ukudibanisa nayiphi na imiphezulu yeetafile zegranite enesitayile sekhofi. Yongeza kwizixhobo ezifanelekileyo ukugqiba ukujonga.
I-Tan okanye i-granite eBrown ineetoni zomhlaba ezityebileyo ezahlukeneyo ukusuka kwitani ekhanyayo, i-sienna ukuya kumdaka omnyama. Ihlala inemigca okanye amachaphaza amaminerali amnyama agqamisa umbala omdakaumbala wesiseko.
Olu hlobo lwegranite lusebenza kakuhle ekudaleni umahluko phakathi kweekhabhathi ezimhlophe, ezinombala okhanyayo okanye ezikhanyayo. Yongeza ubukhulu kunye nobunzulu kwisithuba, isenza sibonakale sifudumele, sigodukile kwaye simema.
Njengegranite yegolide, inyengane emdaka ilungele useto lwasekhitshini lwasekhaya kunye ne-rustic ephefumlelweyo. Ingasetyenziselwa ikhitshi yanamhlanje ukuba ibhangqiwe kunye nohlobo olululo lweekhabhathi zekhabhinethi.
Imiphezulu yeetafile zegranite zeBrown ezidityaniswe neekhabhathi ezimhlophe zihlala zisetyenziselwa i-rustic, ilizwe okanye uyilo lwesiko. Nangona idityaniswe kakuhle ngokukhanya ukuya phakathi kwiikhabhathi zokhuni ezinemibala, igranite emdaka isenokusetyenziswa kunye nekhabhathi emnyama okanye enzulu enombala ukufezekisa umdlalo omninzi kwisithuba. Qinisekisa ukuba usebenzisa le nto ye-countertop ngobulumko ukuze ungenzi ikhitshi lakho likhulu okanye libukhali kakhulu.
Ezinye zeentlobo ezaziwa kakhulu zetan / brown granite yiBaltic Brown Granite, Veneziano Granite, Rainforest Brown Granite, Tropical / Autumn Brown Granite and Desert Brown Granite. Bona Okuninzi iintlobo zemiphezulu yeetafile ekhitshini Apha.
Inkanyamba iBordeaux Granite
Iimpawu: Oluhle kwaye luhle, olu hlobo lwenyengane lunepateni ebabazekayo yemithambo yegolide enzulu kumxube we-beige, ukhilimu kunye nemvelaphi engwevu. Ukufakwa kwegolide sisiphumo sokuvezwa kwe-oxidation kwaye loo matye afunyenwe kwindawo ephezulu yomhlaba anemibala yegolide ebonakalayo. Ikwaziwa njengeNkanyamba yaseBordeaux. Isebenza i-countertop efanelekileyo kwiikhikhini zendabuko kunye nelizwe.
Ixabiso: $ 45 ngonyawo wesikwere (3cm)
IBaltic Brown Granite
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lumnyama kakhulu kwaye luzizityebi. Ngemixube emnyama namdaka egxininiswe ngombala omncinci ongwevu kunye nomnyama. I-Baltic Brown Granite ilungele ukudala umahluko kunye neekhabhathi ezikhanyayo zemibala kwindawo yelizwe.
Ixabiso: $ 17- $ 20 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli: Finlend
I-Granite emhlophe yakudala
Iimpawu: Olunye uhlobo lwegranite olukhangeleka lukhulu, i-Bianco Antico granite inemvelaphi epholileyo engwevu kunye ne-beige ene-taupe kunye ne-pinkish flecks. Ikwabizwa ngokuba yiRoyal Silk Granite. Yenza indawo egxile kuyo yonke ikhitshi emhlophe.
Ixabiso: $ 25- $ 30 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
I-Venetian Gold Granite
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lunetoni yegolide ebonakalayo kunye nomxube wobusi obunemibala, umbala ococekileyo we-beige kunye nokukhanya okukhanyayo kunye nokuhamba kobomvu obunzulu, i-amber, i-brown kunye ne-grey. Ikwabizwa ngokuba yiOuro Brazil.
Ixabiso: $ 15- $ 20 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiGiallo Santo, inemvelaphi emhlophe e-creamy kunye ne-pewter, imithambo emdaka kunye namachaphaza amnyama amakhulu. Olu hlobo lwesitafile segranite luhambelana kakuhle nomhlophe nakweyiphi na ikhabinethi ekhanyayo ekhitshini.
Ixabiso: Iidola ezili-17 ukuya kwi-25 ngeenyawo zenyawo (3cm ubukhulu)
I-Granite entle uJuparana
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lunesanti efana nokubonakala nomxube we-brown, tan kunye ne-sienna yangasemva etshisiweyo egxininiswe ngombala omnyama omnyama kunye nomnyama. Olu hlobo lwesitafile segranite luhambelana kakuhle nomhlophe nakweyiphi na ikhabinethi ekhanyayo ekhitshini.
Ixabiso: $ 30- $ 33 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ubumnandi obuBrown Granite
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiBrown Fantasy, le yigranite ekhanyayo enemibala emhlophe, engwevu epholileyo kunye nemibala emdaka ekhanyayo kunye nokukhanya okumbalwa okumnyama, okuphawulwa yipateni entle yokuhamba. Kukho enye into eyahlukileyo yale granite eyiFantasy brown Leather Granite ene-swirls kunye nephethini encinci ye-wavy. I-countertop efanelekileyo kwiikhabhinethi ezimnyama ezimnyama.
Iimpawu: Iphawuleke kakhulu, ityebile kwaye intle, iSolaris Granite inohlobo olwahlukileyo lwepateni yolusu olumnyama, emdaka ngombala, kunye neeminerali ezingwevu ngokuchasene nemvelaphi etyheli negolide. Ikwabizwa ngokuba yiSolarius Granite. Olu hlobo lwegranite lwenza isiteki esimangalisayo sayo yonke ikhitshi emhlophe.
Ixabiso: $ 30- $ 35 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Iindudumo zegolide yeGolide
Iimpawu: Uhlobo lwegranite olunenkangeleko emnyama, inombala omdaka omnyama, omnyama nomhlophe onamacebo obomvu kunye ne-beige kwipateni ehambayo. IGolden Thunder Granite inembonakalo ye-rustic efanelekileyo ngokufanelekileyo ukongeza ubushushu kumakhaya aphefumlelweyo eli lizwe.
Ixabiso: Iidola ezingama-40 ukuya kuma-55 zeenyawo zenyawo nganye (3cm ubukhulu)
ISanta Cecilia Granite
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiGiallo Cecilia, St Cecilia, St Cecilia Classic, olu hlobo lwegranite lunemvelaphi ye-beige kunye ne-burgundy, igolide kunye nemithambo emnyama engwevu.
IGranite yaseSanta Cecilia lukhetho olufanelekileyo lokubaleka kwiKhitshi elinamacandelo eliMveli eliSizwe. Umbala wayo ugcwalisa ukukhanya ukuya kumbala ophakathi wekhitshi lekhabhathi nekhitshi kunye nelitye lendalo.
Intlango Brown Granite
Iimpawu: Uhlobo oluthile lwegranite kunye nokubonakala okuphakathi. Inamakristalu amthubi namdaka ngombala omnyama kwaye inepateni ehambelana ngokugqibeleleyo. Ikwabizwa ngokuba yiNova Brown Granite okanye Merry Brown Granite, ilungele amakhitshi aneekhabhathi ezinemibala ekhanyayo.
Ixabiso: $ 20- $ 30 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Iimpawu: I-Azurite inyengane inepateni enzulu etyebileyo engwevu emnyama, emhlophe, nokwahluka okumnyama phakathi. Ikwanayo ne-tinge yegolide kunye ne-veining emnyama eyenza ukuba yahluke. Olu hlobo lweetheyitile legranite lusebenza kakuhle njengokuma kokudibanisa iikhabhathi zasekhitshini ezinemibala ephakathi kunye nemillwork elula.
Ixabiso: $ 57 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Amahlathi emvula Brown Granite
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lunomzekelo othile wohlobo olufana namasebe omthi ahambayo. Ikwabizwa ngokuba yiCafe Forest Granite, inee-shades ezishushu zomhlaba zomhlaba omdaka, ongwevu nomhlophe ulungelelaniswe ngemithambo ebomvu kunye neetani. Kuba inenkangeleko etyebileyo, kulungile ukuba ubhangqwe ngombala wekhabhathi ekhanyayo kunye neenkcukacha ezilula ukunqanda ukujamelana nembonakalo yendawo yakho.
Ixabiso: Iidola ezingama-30 ukuya kwezingama-40 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Eyona nto iphambili kwiWest Gold Granite
Iimpawu: Umxube ongathathi hlangothi ofudumeleyo we-beige, ongwevu okhanyayo kunye nomdaka okhanyayo ngemithambo emnyama. I-Key West Gold Granite ngumdlalo ofanelekileyo kwiikhabhathi zekhitshi ezinemibala ekhanyayo kwilizwe elinomxholo.
IMadura Gold Granite
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiMadurai Gold, iGolide Oak Granite, iGolide yaseIndiya, iJuparana Valentine, iKashmir Gold Granite. Olu hlobo lwegranite lunembonakalo ecolekileyo yesanti etyheli kunye nesiseko esingwevu sokukhanya negolide kunye namachaphaza abomvu Ihlala ifumaneka ngee-shades ezimbini, ukukhanya kwegolide kunye negolide.
Ixabiso: Iidola ezingama-55 ukuya kwii-65 ngeenyawo zonyawo (3cm ubukhulu), $ 40 ukuya kwi-50 ngeenyawo zenyawo (2cm ubukhulu)
IKashmir yeGranite yeGolide
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiCashmere Gold, Kasmir Gold, Kashmere Gold okanye Kashmire Gold Granite. Inombala wegolide ongwevu okhanyayo, umbala obomvu, omnyama, ongwevu namdaka kuwo wonke. Nangona kunjalo, ii-slabs ziyahluka njengoko ezinye zinokubonakala ngathi zityheli ngakumbi okanye ezinye zitshebe ngakumbi ngombala. Olu hlobo lweetheyitile legranite lusebenza kakuhle ngeekhabhathi zekhitshi ezenziwe ngombala eziphakathi ukuya kwezimnyama. Kwakhona, ipateni yayo ecekeceke kunye ethambileyo inokuncedisa nakwiikhabhathi ezihonjiswe kakhulu.
Ixabiso: $ 50 ukuya kwi-75 yeenyawo zenyawo zenyawo (3cm ubukhulu)
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lunomgangatho ophakathi ukuya kubukhulu becrystallization. Ngokuhamba okumodareyitha kwepateni kunye nokudityaniswa kwendlovu, i-taupe, i-pewter kunye nemvelaphi yetopazi, inee-streaks ezithile ze-sienna etshisiweyo kunye nomdaka. Ice Brown Granite inokusetyenziselwa ukwenza umahluko wokukhanya ukuya phakathi kweekhabhathi zekhitshi ezinemibala.
Ixabiso: $ 25- $ 35 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lunentshukumo ebabazekayo kunye nephakamileyo ye-browns efudumeleyo kunye ne-swirls epholileyo egrey ngokuchasene nemvelaphi ethambileyo kunye nebala elimdaka ngombala. Ikwabizwa ngokuba yiTiger Gold Granite okanye iClassic Gold Granite, ilungele amakhitshi anemibala ekhanyayo.
IGeriba yeGranite yeGolide
Iimpawu: Le laminate efanisa ukubonakala kwegranite yokwenyani. Inemvelaphi emhlophe nengwevu egxininiswe kwi-sienna eshushu, amachaphaza amnyama namdaka. IGeriba Gold Granite inokuthatha indawo yelitye lendalo kwaye inokusetyenziswa njengempahla yekhawuntara yekhitshi, nangona kunjalo, ayinazimpawu zokomelela lenyengane. It is a stain resistant, impembelelo enganyangekiyo, iposi uyila kwaye kulula ukuyigcina, kodwa ngokungafaniyo negranite edla ngokuhlala ixesha lokuphila ukuba ikhathalelwe ngokufanelekileyo, ii-laminates zihlala zineminyaka engama-20 ukuya kwengama-25 yobomi. Ngokubonakalayo, i-Geriba Gold laminate inokusetyenziswa njengeyona ndlela isebenzayo kunye neendleko ezifanelekileyo kwi-granite, kodwa ine-cons yayo ekuhambeni kwexesha. Ukugqitywa kwelaminethi kunokuncedisa ukukhanya kwekhabhinethi ekhanyayo, ephakathi kunye emnyama.
Ixabiso: $ 45 kwiphepha ngalinye
I-Ivory Brown Granite
Iimpawu: I-Ivory Brown Granite inemvakalelo efudumeleyo kunye ne-rustic eyenza ukuba ifaneleke kakhulu kwiikhitshi eziphefumlelweyo zeMeditera. Yenziwe ngombala obomvu ngombala kunye nomxube wekhilimu kunye nebrawuni enemixube yepesika kunye ne-burgundy, egxininiswe ngamachaphaza amnyama nagrey.
Ixabiso: $ 37 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
I-Millenium Cream Granite
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiMillenium Gold Granite, yigranite enombala onkhilimu kunye ne-tinge ye-tan, imigca yegolide kunye nemibala emnyama emnyama. Olu hlobo lwegranite lunovakalelo oluhle kwaye ngumdlalo ofanelekileyo weekhabhathi ezimnyama emdaka.
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite luphawuleka kakhulu kwaye lutyebile olwenza ukuba lube lolona lufanelekileyo kwikhitshi elinobunewunewu. Iphawuleka yipateni enqabileyo yemarbling ye-pewter, yeendlovu, emnyama negolide. Xa isetyenziswa njengesixhobo sokubala, ikhawuleza ikhanyise nayiphi na ikhitshi.
IGolden neSilivere yeGranite
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lunepateni ekhethekileyo etyebileyo esebenza kakuhle ekongezeni idrama ekhitshini lakho. Ibonakaliswa yimxiture yemithambo emnyama nengwevu epholileyo, imigca yegolide ngokuchasene nomhlophe . Igolide kunye nesilivere lenyengane ilungele ukongeza ubukhulu kunye nomdlalo weqonga kuyo yonke ikhabhinethi emhlophe.
Iintsingiselo zothando olunentsingiselo ngaye
Ukuphuma kwelanga iGranite
Iimpawu: Uhlobo lwegranite etyheli kunye noburhabaxa obucolekileyo kunye nomxube wobrawuni omnyama, omnyama kunye nomdaka. Kwakhona kunemvakalelo efudumeleyo eyenza ukuba ifaneleke kakhulu njenge-countertop yeekhabhinethi ezikhanyayo ezikhanyayo. Ukuphuma kwelanga i-granite etyheli ngumdlalo ogqibeleleyo wokukhanya ukuya kwikhabhathi ekhitshini enombala ophakathi.
Bona ezinye iintlobo ze imibala lenyengane kubandakanya iintlobo zomphetho ezithandwayo kunye nokugqitywa apha.
Umama wengubo yomtshakazi nomphezulu
Iigawuni zomtshato zomtshato waselwandle
Isithembiso amakhonkco intsingiselo kwintombi